ဗဟုသုတ – Shwe Likes
ကပ်ရောဂါ ဆိုးများ ကင်းဝေးစေသည့် ဆုတောင်းပြည့် “ဘုရားငါးဆူ ဂါထာတော်” (မျှဝေပေးပါအုံး …)
ကပ်ရော ဂါဆိုးများ အတွက် လယ်တီ ဆရာတော်ကြီး ကိုယ်တိုင် စပ်ဆို ခဲ့သော နတ်ချစ် ဂါထာတော် အဖြစ် ဘုရားငါးဆူ ဂါထာတော်၊ အန္တရာယ်ကင်း တံဆိတ်တော် နှင့် ကိုယ်တွေ့အကျိုး ကျေးဇူးများ လယ်တီ ဆရာတော် ဘုရားကြီး လက်ထက် မြန်မာပြည်အနံ့ ပလိပ်ကပ် ရောဂါဘေးတွေ ဆိုက်နေချိန်မှာ ဆရာတော်ကြီး ကိုယ်တိုင်
လာဘ်ပွင့်စေရန် မိမိရ ရန်ရှိေ သာ ငွေများပြန် ရရန် /မိမိ ပေးရန် ရှိသော ကြွေးများပေး နိုင်ရန် အောက်ပါ အစီအရင် ပြုလုပ်ပါ
1 မည်သ ည့်နေ့သားသမီး မဆို တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်5နာရီတွင် ပြုလုပ်ပါ2တောင်းထဲ တွင် ဆန်တစ်ပြည် ထည့်ပါ 3. ဖီးကြမ်း ငှက်ပျောသီး5ဖီးကို သင့်တော်သလို စီထည့်ပါ(ဖီးကြမ်းသာ ဖြစ်ရမည် အခြားငှက်ပျောမရပါ) 4. သပြေခက် 3ခက် ဖယောင်း တိုင်
သားသမီး ကို ငရဲပေး တဲ့ မိဘ ဆိုတာ တကယ် ရှိ သလား… ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ရော အက်လိုဖြစ်နေပီလား
သင်မဖတ် ပဲကျော် သွားလျှင် ဘာတစ်ခုမှ သိမယ်မဟု တ်ပါ) သားသမီး များကိုငရဲပေး တဲ့မိဘ ဆိုတာ တကယ် ရှိပါတယ်။ (၁) `အပြစ်တင်လွန်းတဲ့ မိဘ´ဘာလုပ် လုပ်အပြစ်တ င်နေတတ်တာတ နည်းဆိုရရင် လောဘကြီး မိကြတာပါ။ အသုံးမကျဘူးဆို တဲ့ဘောင် ထဲသွတ်သွင်းတာ သားသမီးက တကယ်အ သုံးမကျ တာဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ဒါပေမဲ့အ
လက် က အနာက ယားနေ လို့ ဆေးခန်း သွားပြရာမှ ဆရာဝန် က ရေသောက်ကြည့် ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါ
လက် က အ နာက ယားနေလို့ ဆေးခ န်းသွားပြရာမှ ဆရာဝန်က ရေသောက်ကြည့် ခိုင်းလိုက် တဲ့အခါ ကြောက်စရာေ ကာင်းလိုက်တာ အဲ့ဒီနေ့တော့ တော်တော်ကိုအမှ တ်တရဖြစ်ခဲ့တဲ့နေ့…ဆေးခန်းမှာလူနာ ရှုပ်တဲ့နေ့၊လူနာ များတာ မဟုတ်ဘူး…။လာတဲ့လူနာေ တွလည်ြး ကည့်လိုက်ဦး၊ဆိုင် ကယ်မှောက်တဲ့လူ နာက၂ယောက်။ တစ်ယောက်အ နာကကြီးတော့ ချုပ်ပေးရမှာ။ ခေါင်းပေါ်သစ် သားချောင်းပြုတ်ကျပြီး
အဆုတ် ကျ န်းမာရေး ချွတ်ယွင်း လာပြီဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ် မှာပြလာ တတ် တဲ့ လက္ခဏာရပ် များ
ယနေ့ခေ တ်မှာ လူဦးရေထူထပ်ပြီး ယာဉ်တွေ ပေါများလာ တာကြောင့် လေကောင်းေ လသန့်ရဖို့က ခက်လာပါပြီ။ အဲဒါကြောင့် အဆုတ်ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။ အဆုတ်က နေမကောင်းရင် ခန္ဓါကိုယ်မှာ လက္ခဏာတွေ ပြလာတတ်ပါတယ်။ ၁။ ကျောနဲ့ ပုခုံးနာကျင် လာခြင်း ရင်ဘတ်အောင့်တာက အဆုတ်ကင်ဆာရဲ့ ရှေးဦးလက္ခဏာဖြစ်တာတောင် ကျောနဲ့ပုခုံးနာကျင်လာခြင်းက တွေ့ရခဲတဲ့ လက္ခဏာပါပဲ။
ကိုဗစ်ကာလကြီးမှာ ဝတုတ်လာတဲ့သူ ၊ ဗိုက်ခေါက် ထွက် သူ၊ အဆီ ကျချင် သူများ အတွက် ပိုက်ဆံ မကုန်ဘဲ အကောင်းဆုံး ပြန်ဝိတ်ကျ လာ မယ့် နည်းလမ်း
အစ်မ တစ်ယောက်က ရှားစောင်း လက်ပတ်ယိုလေး တင်ထား တာတွေ့လို့ ညီမလည်း ပြန်ရှယ်ပါရစေနော်။ ဝတဲ့သူေ တွဒါမှမဟုတ် ဗိုက်ပူတဲ့သူေ တွအတွက် အရမ်းအဆင်ပြေတယ်။ အိမ်ရှင်မ တော်တော်များများ ရဲ့ဒုက္ခကဗိုက်ပူတာပါပဲ။ ညီမလေအဲ့ယိုလုပ်နည်းကို မေမေကတဆင့် သိတာပါ။ စားကြည့်တော့တကယ် ဗိုက်ကျ တယ်ရှင့်။ ရှားစောင်းလက်ပတ် ငါးတက်လောက် ကို ဘေးကစူးသွားတွေကို ဓားနဲ့ခွာပီး လက်တစ်ဆစ်လောက်လေး
သင်မသိသေးတဲ့ ဂျင်း က ပေးတဲ့ ကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုး ( ၈) မျိုး
ချင်း (ဂျင်း) က တော့ အိမ်သုံးေ ဆးဝါး တစ်ခုလို့ ပြောရင်လဲ မမှားပါဘူး။ မီးဖို ချောင်မှာ အလွယ် တကူ ရနိုင် တဲ့ အရာ ဖြစ်ပြီး ဈေးလဲ မကြီးပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဘယ်သူ မဆို အလွ ယ်တကူ ၀ယ်ယူ သုံးစွဲလို့ ရတဲ့ အရာတစ်ခု
ကိုဗစ်စစ်ဖို့ အတွက် နှာခေါင်းတို့ ဖတ်၊ အာခေါင်တို့ ဖတ် ယူ ရင် နာလား
အာေ ခါင်တို့ဖတ် ၊နှာခေါင်းတို့ ဖတ်ယူရင်ေ သအောင်နာမယ် ဆိုတာမဟု တ်ပါ။ နှာခေါင်းတို့ ဖတ်၊အာေ ခါင်တို့ဖတ်တွေ ယူဖို့လိုသူေ တွကို သေအောင် နာမယ်ဆိုပြီး ကြောက်လ န့်အောင်ပြော ထားတာေ တွ ရှိတော့ အကြောက်လွန်ေ နကြပါတယ်။ လူတွေမှာလည်း ငါတို့တော့ ဒီအချောင်းကြီး နှာခေါင်းတ ဆုံးထိုးခံရ၊ ဒုက္ခအမျိုးမျိုး ခံရတော့မှာပဲ
သင့် ပါးစပ်က ထွက် တဲ့ စကားလုံး တိုင်း က သင့် ဘဝ ကိုပြောင်းလဲစေနိုင် တဲ့ အတိတ်နိမိတ်များ
ပိုက်ဆံ မရှိဘူးလို့ ပါးစပ်က အမြဲပြောနေရင် တနေ့တခြား ကြပ်တည်း လာတာ ပိုသိသာ လာတယ်၊ အဆင် မပြေဘူးလို့ ခနခနတွေးေ နရင်ပိုပြီး အဆင်မပြေဖြစ်လာတယ်။ ဒါ အယူအဆမ ဟုတ်ဘူး ဘာသာရေး အတွေး မဟုတ်ဘူး။ Psycho သဘောပဲ ကြားရဖန်များရင် အတွေးတွေဖြစ်လာတယ်။ ပြောပါများရင် အာ့အတိုင်း ယုံကြည်လာတယ်။ ကြာတော့
ခရီးတွေ ထွက် ရင် ဘာကြောင့် အသွားခရီး က ကြာပြီး အပြန်ခရီးက မြန်လေ့ရှိတာလဲ …
ခရီး သွားတယ် ဆိုတာ လူတော်တော် များများ ကြိုက်ကြတဲ့ အရာ တစ်ခုပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ခရီးထွက်တာဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေး ကို ကောင်းစေတဲ့အပြင် စိတ်ကိုလည်း အင်မတန်ပေါ့ ပါးစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လူတိုင်းဟာ ခရီးထွက်နိုင်တုန်းအချိန်မှာ ခရီးထွက်ပါ။ ကိုယ်သွား လာနေနိုင်ပြီး ငယ်ရွ ယ်တဲ့အချိန်မှာ ခရီးထွက် တာဟာ